हेर्नुस् १८ वटा कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुनको कति? - जन आवाज
हेर्नुस् १८ वटा कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुनको कति?
शनिवार १९ असार, २०७८
नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल १८ कम्पनीलाई साधारण शेयर (आइपिओ) बिक्रीको अनुमति दिएको छ । बोर्डको विवरणअनुसार पछिल्लोपटक युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको छ । सो कम्पनीले रु ६४ करोड ५० लाख बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न पाउने अनुमति पाएको छ ।